ANDRON’NY TEATRA : Manatanteraka fifaninanana lehibe ao Matsiatra Ambony
Isany hetsika ara-kolotsaina efa nisy teto Madagasikara an-taonany maro ny tontolon’ny teatra. Manam-porofo izany ny fisian’ireo zokibe mpisehatra teo amin’izany tantara an-tsehatra izay mbola mijoro mandrak’ankehitriny. 14 février 2018
Ny teatra izay manana ny anjara toerany lehibe tokoa eo amin’ny tontolon’ny zavakanto na dia eo aza ireo fandrosoana maro samihafa. Tsara ny mampahafantatra fa efa nametraka andro iraisam-pirenena ho an’ny teatra ny Unesco, dia ny 27 marsa izany. Tsy hamela io andro io handalo fotsiny araka izany i Madagasikara fa anisany hankalaza izany ny ao Fianarantsoa. Hisy araka izany ny fifaninana teatra hokarakarain’ny foibem-paritry ny kolotsaina sy ny vakoka ao Matsiatra Ambony.
Hetsika izay hiarahana miasa ihany koa amin’ny foibem-paritry ny fanabeazam-pirenena, miaraka amin’ny foibem-paritry ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana sy ny avy eo anivon’ny fikambanan’ny mpilalao tantara an-tsehatra. Malalaka amin’ny lohahevitra izay safidiany ny mpifaninana mandritra izany, araka ny fanazavana. Misy kosa anefa ireo fepetra napetraka mba tsy hivaona amin’ny tanjona tiana tratrarina, dia ny hoe tantara mampita hafatra manabe, tantara tsy mamoafady, tsy manohitohina ny kolotsaina maha malagasy, ary tantara tsy tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana.
Jerena manokana ny hafatra manabe
Mandritra ny 30mn ka hatramin’ny 40mn no hanehoan’ny mpandray anjara tsirairay ny sangan’asany ka tsy mihoatra ny folo ny isan’ny ao anaty tarika iray. Efa misy ihany koa ny mason-tsivana napetraka hitsaràna ireo mpandray anjara amin’izany. Tafiditra ao anatin’izany ny fijerena ny votoatin’ny tantara haseho, ny hafatra manabe, ny lafiny ara-kolotsaina, ny lafiny ara-javakanto.
Eo ihany koa ny seho sehatra ka mila hasongadina ao ny fahaiza-milalaon’ny tsirairay sy ny ekipa, ny haingon-tsehatra ary ny fomba fitafy. Araka ny fanazavan’ny mpikarakara hatrany dia amin’ny fiteny malagasy ofisialy na fitenim-paritra avy any Matsiatra Ambony no hivoizan’ny mpifaninana ilay tantara an-tsehatra entiny.
Ny 24 Marsa ny dingana famaranana
Efa nisy araka izany ny fivoriana nanasan’ny mpikarakara ireo mpampianatra sy talen-tsekoly miankina sy tsy miankina amin’ny fanjakana nentina nanazavana tamin’izy ireo ny fizotr’ity fifaninanana ity. Araka ny fantatra àry dia hanomboka ny 03 marsa ho avy izao ny fifanintsanana ka lisea 11 no mandray anjara amin’izany. Ny 10 marsa kosa indray ny fifanintsanana hataon’ireo sekoly 13 avy any anivon’ny kolejy. Ny sokajy fahatelo kosa indray dia natokana ho an’ny fikambanana sy ny maro hafa ivelan’ny ankizy mpianatra. Ny 17 marsa kosa no hizoran’ny fifanitsanana ho azy ireo. Eny amin’ny Amphi an’ny Dren Mahamanina no hanatanterahana ny fifanitsanana rehetra. Ny 24 marsa kosa no hanaovana ny dingana famaranana ho an’ireo ekipa roa na tarika voalohany isaky ny sokajy, araka ny fanazavana hatrany.